Running igiya izitimela kuhlanganisa sebuningini teluhlaka, kodwa omunye Ukhiye wheelset. Kukhona izinguqulo ezahlukahlukene ingxenye, futhi azigcini nje ngokuhluka isayizi shape, kodwa futhi ikhono lokubekezelela imithwalo ezahlukene. Ngezindlela eziningi, lesi sici kuyinto juqu ngenxa ukusebenza ekuphileni ibhanoyi. Abakhiqizi ekuqaleni endow ke oluxube okusezingeni eliphezulu ukusebenza ezingaba, kodwa yebo, lokhu akuqinisekisi ukuqedwa ephelele iloli futhi eziyimbangela yezinkinga ezizuzwa. Kungakhathaliseki ukuthi injongo nokusetshenziswa ezokuthutha, isondo namabhuzu izimoto kudingeka silondoloze kulesi simo. By the way, bafake aphansi kungokwemvelo - enye into liyadingeka kwabasebenzi ukuthola esifike izindawo eduze ukwehluleka futhi sifeze efanele ukulungisa imisebenzi.
Naphezu ukusetshenziswa design eyizingqabavu nge high-amandla metal Alloys, imithwalo eqinile ashukumisayo futhi static kungaholela hhayi kuphela ukugqoka kodwa futhi ukuba ukusonteka. Ngo sifo siphatha kakhulu nemfundo ezifana wheelsets zesitimela, kusukela e isitimela kwenzeka ngesikhathi voltage ngomfutho ukuze zone contact we wesitimela namasondo. Ngakho-ke, ukuze sinciphise imiphumela emibi enjalo i inqubo nokuxhumana zihlanganisa carbon ingxubevange ngezabelo ezinkulu. Noma kunjalo, umthwalo zingandiswa uma iqembu kufanele abe ezindaweni umgwaqo laying ijika - ke lidala ukucindezeleka okwengeziwe ngenxa amandla centrifugal.
Akufanele sicabange ukuthi pair of izitimela umgibeli babe izinzuzo ezinkulu ngesimo imithwalo ongaphakeme. Ngokwengxenye, yebo, izingozi kuleli cala ephansi, kodwa ushaywa futhi jerks ku ezinyakazayo futhi adluliselwa ibhanoyi, lapho wheelset ugibele imoto lizogcina likhathele. Kuyaphawuleka, nezinye izinto ezithinta isimo lamasondo. Phakathi kwabo, kwabhoboka amandla skid ukushelela umphumela, eksisi lokuxhumana engadingeki ne ukushayela ingxenye, amaphuzu, indawo yokuwela nokunye. D. Manje ungafunda kabanzi mayelana izinhlobo ezivame kakhulu amaphutha.
Seamless-bafake ngazimbili amasondo
Amaqembu athile elikhethiwe bafake ezinjalo. Eyokuqala kumiswa ukugingqikela iyunifomu, okuyinto ibhekane wheelsets namakalishi ngisho operation evamile. Ukubonakala ukusonteka ezinjalo ngenxa yokuthi ukuthi ukungezwani eqinile, elibangela amasondo ukuthi unikezele phambili kobuso adalwe ukuxhumana komzila wazihlephula pads.
Futhi basakaza subfloor engalingani. It libhekene ukubukeka ukusonteka esishintshashintshayo akuyona kuyo yonke contact endaweni zone, kodwa kuphela izimbazo ezithile. Lokhu kubonisa ukuthi ngazimbili isondo izimoto zavezwa kusuka ukusatshalaliswa engalingani izakhiwo yonkana mass ingxubevange. Lokho kufakazelwa ukubukeka Ukweqa ezinjalo, ngokuyinhloko ngomshado ngazimbili ngokwabo. Ngaphezu kwalokho, kuyafaneleka rush isiyingi. It kungabonakala nasemkhakheni ngaphandle contact usebe isondo lapho yamaqabunga ezinhlangothini wotho.
Gqoka evele ngezicathulo
I ukusonteka yalolu hlobo futhi zenzeka endaweni indawo contact. Isici zokukhandleka ukuthi kwenzeka uma ushayela skid. Ngakho-ke, ukusonteka of evele ugingqe ivame ukuhlotshaniswa abahluphayo pad ukubopha. Ngokubukeka efana wheelsets iphutha selivela isilayidi - lokhu ingxenye flat phezu kwensimbi abanebala elimhlophe. Naphezu kweqiniso lokuthi ngesikhathi ukusebenza, ukukhubazeka okunjalo musa abangele hhayi ezinkingeni ezingathi sína, bangaya ukuba uhlobo enkingeni.
Iqiniso liwukuthi ezindaweni slide cishe njalo waphawula ukushisa ephakeme, okuyinto idluliselwa ezijulile usebe. Ekugcineni, kwakheka vyscherbiny okuthiwa entailing umbala athile Ukweqa indawo. Ngokuhamba kwesikhathi, wheelset iqala ngozwelo ukubhekana nanoma yisiphi semfene "ngendwangu", okuyinto luhambisana nomthwalo ukubukeka uhlevane ku chassis. Ngakho-ke, uma amaslayidi kutholwa ezingaphezu kuka-1 mm, ijubane isitimela esiya imingcele enzima kuthiwa eziphoqelelwe. By endleleni, le Lesi sifo siphatha kakhulu ukuba ukusonteka enjalo wheelset esitimela nempahla nqola. Kuyaphawuleka ukuthi izinga ukwakheka slide incike isizini - ngokwesibonelo, ebusika kanye kwentwasahlobo izingozi imfundo ephakeme.
Amaphutha entanyeni predpodstupichnyh uvame ukuzibonisa ngesimo izimbazo wosayizi omncane. kungenzeka eziningana Izizathu zalokhu. I ukusonteka kwenzeka ngokuyinhloko ngenxa enganele ngokuqinile uxhumano futhi kulezo zimo lapho yokuhlanza metal evele ngokumelene nokugqwala ukwakheka waba ngokungalungile ababulawa. Futhi oluvala amasondo wheelset ngokuvamile ngaphansi waphuka nokusasamba ezindaweni nezingcindezi eliphakeme. Lezi zinqubo zenzeka ngenxa ukucindezeleka eyindilinga, khona izindawo nezigaba ushintsho futhi unokungaxhumani we metal uqobo. Yiqiniso, hhayi ngaphandle futhi ukwehluleka komkhuba njengoba insufficiently eqinile imishudo okunamathiselwe namantongomane.
Lokhu umonakalo uhlamvu thermomechanical ehlasela wheelsets izinqola ugibele evele. Lapho enjalo ukusonteka ukuhlolwa fixed phuca impahla zone nge ifomu ezimise U-. Okusho ukuthi, uhlobo plastic ukusonteka izinqubo. I shift esiphezulu ewela ngumgogodla strip contact. Ngakwelinye ihlangothi, shift ubuncane zingatholakala ku emaphethelweni. Imbangela umonakalo sinjalo ukusatshalaliswa umthwalo ingcindezi endaweni contact.
izinyathelo Jikelele yesondlo amasondo
Izinyathelo ukusiza ukunweba amasondo yokusebenza. Isondlo kuhilela kokwenza ukuhlolwa, luhlolo, izinkomba iyokhandwa imisebenzi, nokunye. D. Uma sikhuluma enama, abaluleke kakhulu wabo kokuphenduka kwesokudla isondo alokuncane ungqimba ubuncane ukususwa metal. Inombolo obtochek encishisiwe ngenxa imisebenzi ekhethekile okuhloswe ngazo ukuthuthukisa ukuthembeka isondo ngazimbili nekugwema ubuthakathaka ekhona we chassis. Ikakhulukazi, ochwepheshe zama ukukhipha amandla izici, okuyinto zenzeka ngesikhathi ukusebenza futhi ngenxa yokulimala ngaphambilini kuzona. Ngokwesibonelo, iqedwe inkinga izingxenye entwasahlobo steel ezithinta izinga base chassis.
Ukulungisa imisebenzi lwenziwa machining zone ekhethekile emva izingxenye ziye bahlanza kahle. Ngo umnyango ekhethekile eyayibanjwe ushintsho kwamasondo, ukuvula noma ukwenza imisebenzi Welding. Uma uhlela ukuba ukulungisa sesondo ngazimbili ukuze ushintshe izakhi sephrofayela, umsebenzi kwenziwa ngokusebenzisa izifanekiso ekhethekile. Kufanele kuqashelwe ukuthi ukuphambuka kwamukelekile kwemigomo amasondo isifanekiso 1 mm ngesikhathi ibambene bulala, futhi ubuso kwangaphakathi ski futhi nesayithi libe - 0.5 mm. Njengoba sekuphawuliwe, Welding ukusebenza kagesi ingasetshenziswa ukulungisa. Imishini enjalo siqhutshwa ukusika eksisi wentambo ebhekene zungeza apertures.
Kukhona imithetho ekhethekile ngokuningiliziwe zaveza ukungasebenzi wheelsets, kanye nezindlela kanye nobuchwepheshe futhi bawabulale yabo kanye nokuvinjelwa. Kubalulekile ukuqaphela ukuthi chassis enza wonke iqoqo izici izakhiwo lokukhanda. Ngenxa yalokho, ukusebenza kanye isevisi ukuphila we wheelset ungaxhomeki kuphela izinga imizila, kodwa futhi ohlelweni ukubopha, entwasahlobo-entwasahlobo iyunithi, imodi traffic, ngisho isikhathi sonyaka.
Battleship "Bismarck": ngokuwa giant
Okwami Zasyadko. Ingozi at Zasyadko yamalahle
Sitshele ukuthi steel constructional
Izicishamlilo zemininingwane kusiza ekucimeni imililo
Izimonyo Ayurvedic: Izibuyekezo
ECanary Islands amahhotela abonisa ekilasini okusezingeni eliphezulu
I-Stropuva (ubheyili): izibuyekezo. Ama-boilers aqinile aseStropuva: amanani